ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်က သိုင်းပြောင်းပြန်သင်တန်း | Thaing Wizard
Posted on February 13, 2015 by Aung Thu Htet	(ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ် နှစ်(၈၀)ပြည့် ပတ္တမြားရတုအထိမ်းအမှတ် ဒသမအကြိမ်မြောက် နှစ် လည်မဂ္ဂဇင်း ၂၀၀၄-၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ဆရာကြီးဦးတင်မြင့်ရေးသားခဲ့သော သိုင်းပြောင်းပြန်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဆောင်းပါးလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုဆောင်းပါးကို Thaing Byaung Byan FB Account မှ ကူးယူဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။)
This entry was posted in Bando, Banshay, Martial Arts, Martial Arts Article, Pwe Kyaung, Thaing Byaung Byan and tagged ဆရာချယ်, ပွဲကျောင်း, ဗန်တို, ဗန်ရှည်, သိုင်းပြောင်းပြန်, ဦးတင်မြင့်, ဆောင်းပါး by Aung Thu Htet. Bookmark the permalink.	One thought on “ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်က သိုင်းပြောင်းပြန်သင်တန်း”	ထင်လင်း on February 13, 2015 at 1:04 pm said: